पति बाहिर भएको बेला गर्भवती भएकी श्रीमतीले दिइन् दुनियाँ चकित हुने…
तपाई हामीले देखेको तथा भोगेको कुरा हो विवाहपछि महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तन आउँछ । पारिवारिक व्यवस्तताका कारण उनीहरुलाई आफ्नो शरीरलाई ध्यान दिन सक्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको शरीरमा परिवर्तन आउँछन् । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा…
काठमाडौं –तपाईं केके कामहरू गर्न मन पराउनुहुन्छ ?घुम्न, हिड्न, नाच्न, पौडिन, एक्लै बस्न, अध्ययन गर्न या अरू केही ? तपाईं शोखिन हुनुहुन्छ भने के कस्ता कुरामा हुनुहुन्छ ? एकपटक सोच्नुहोस् त । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, कुनै एक युवतीले आफ्नो…
हाम्रो समाजमा शास्त्रीय मान्यतालाई अहिलेसम्म सत्य मानिन्छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ ।समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि ब्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन…
सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य हो बंगलादेश मा एउटा एस्तो बिवाह जहाँ बेहुली ले जन्ती बोकेर दुलाहा को घर मा बिवाह को लागि पुगिन अहिले यो बिषय धेरै नै भाइरल भैरहेको छ ! १९ वर्षकि दुलही कदिजा अख्तर ले आफ्नो पाहुना हरुको लागि यस्तो गरेकी…
काठमाडौं । अब मंसीर लाग्दैछ, यो सँगै विवाहको चटारो पनि हुने गर्दछ । समाजमा अझै पनि शास्त्रीय मान्यतालाई साँचो मान्ने गरिएको छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा…
मानिसहरु जन्मिदा आ-आफ्नै भाग्य लिएर आएका हुन्छन् भन्ने हिन्दू धर्म शास्त्रको मान्ता रहेको छ । धर्मशास्त्रअनुसार जन्मकै आधारमा मानिसको भाग्य पनि निर्धारण भएको हुन्छ । जन्म कुण्डलीअनुसार हरेक मानिसको भाग्य फरक–फरक रहने गर्छ । यस्तै सातवटा…
भनिन्छ एउटा सफल पुरुषको पछाडि एकजना असल नारीको भूमिका हुन्छ । हुनपनि असल नारी भएको घर नै स्वर्ग समान हुन्छ ।शास्त्रले पनि यहि बताउँदै आएको छ की असल नारी कुनैपनि घरको गहना हो । यहाँ हामीले नारीमा हुनुपर्ने केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं। जुन…
ललितपुर, ३० असोज । मानिसले चुरोट पिउनु स्वाभाविक हो । बाँदरले पनि चुरोट पिएको घटना छ । तर, बोकाले चुरोट पिएको विरलै सुनिएको छ ।तर, शंखादेवी मन्दिर परिसारको यो बोकालाई धुँवा असाध्यै मन पर्छ । त्यसमा पनि पचुरोटको धुँवा भनेपछि हुरुक्कै । चुरोट…
काठमाडौ । कुनै नयाँ कार्य गर्दा हामिले एकपटक सोचबिचार गरेरै गर्नु राम्रो हुन्छ । जे कार्य पनि हतारमा गर्दा कार्य सफल नहुन सक्छ । त्यसैले कुन बार कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा हामिलाई थाहाँ हुनु जरुरी छ । बेलैमा कस्तो कार्य गर्दा…
यदी धनको अभाव छ या धन आएपछि पनि तपाइँसँग रहँदैन या टिक्दैन भने तपाइँ चिन्तित हुनुहुन्छ होला । यदी तपाइँ यस्ता समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने केही उपाय अपनाउन सकिन्छ ।ज्यातिष शास्त्रका अनुसार एक नोटको मद्दतमा धन नटिक्ने समस्या समाधान गर्न…